Apprepo: အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအက်ပလီကေးရှင်းများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နောက်ထပ်ကွန်ယက်သိုလှောင်ခန်း | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 26/07/2021 06:00 | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ, အတော်ကြာ
အဖြစ်ကောင်းစွာပြီးသားလူသိများသည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးသုံးစွဲသူများ, တပ်ဆင်ရန်စံပြ software (ပရိုဂရမ်များနှင့်ဂိမ်းများ) ငါတို့ရဲ့ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကနေတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် repositories။ သို့သော်အကြိမ်များစွာတွင်၎င်းတို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများမပါရှိသောကြောင့်၎င်းမှတစ်ဆင့် packages များနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်သည် Snap နှင့် Flatpak.
နှင့်အခြားအချိန်များ, သင်ကိုသုံးနိုင်သည်ရရှိမှုပေါ်မူတည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် executable files များ၊ installation script များဖြစ်သည်နှင့်ပြီးသားကျော်ကြားနှင့်အသုံးဝင်သော universal ပုံစံ ကိုခေါ် AppImageအခြားနည်းလမ်းသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းများအကြား။ တိကျစွာဒီလိုအမျိုးအစားဖိုင်တွေရဖို့အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအများကြီးရှိတယ် "အပ္ပိ", အရာယနေ့ကျွန်တော်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်အကြောင်းအရာသို့အပြည့်အဝမသွားခင်၊ ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိတ်အဆက်ကိုချက်ချင်းစွန့်ခွာသွားလိမ့်မည် ယခင်ဆက်စပ် post ဘယ်မှာသူတို့နှင့်ဆင်တူသည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မည် "အပ္ပိ"လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့နေရာ software (ပရိုဂရမ်များနှင့်ဂိမ်းများ) ဟုအတွက် AppImage ပုံစံ:
"မည်သူမဆို“ .AppImage format” ပုံစံဖြင့်မည်သည့်ပရိုဂရမ်မျိုးမဆိုအထူးသဖြင့်ဂိမ်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်၊ ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထိုအရာများမှာ AppImageHub.com, AppImageHub.GitHub.io, Portal Linux ဂိမ်းများနှင့် Linux-Apps.com (Games AppImage) ။" AppImage ဂိမ်းများ - ဘယ်နေရာကိုများများ AppImage ဂိမ်းများရနိုင်မလဲ။
1.1 Apprepo ကဘာလဲ?
1.2 AppImage သည်မည်သည့် application အမျိုးအစားများကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်တိုတိုပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြနိုင်သည် «ကွမ်းခြံကုန်း» အဖြစ်:
“ ဆန္ဒအလျောက်အကျိုးအမြတ်မယူသောစီမံကိန်း သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် AppImage ပုံစံဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ Repository တွင်ယနေ့ 24/07/2021 တွင်မည်သည့်ခေတ်မီ GNU / Linux Distribution တွင်မဆိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သောအရည်အသွေးမြင့် application ၂၃၄ ခုကျော်ရှိသည်။"
သို့သျောလညျး ၎င်း၏ထိန်းသိမ်းသူများသတိပေး လာမည့်:
AppImage သည်မည်သည့် application အမျိုးအစားများကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကတစ် "ရှာသူ" လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ထိပ်မှာ အက်ပလီကေးရှင်းရှာဖွေရေး အမည်များသို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်ဇာတ်ကောင်ပုံစံအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
သို့သော်ချက်ချင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကျွန်တော်တို့ကို 36 ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုပေးထားပါတယ် ၎င်းတွင်တည်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏လက်စွဲရှာဖွေခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။
ထိုအမျိုးအစား ၃၆ ခုအနက်မှလက်ခံထားသည့်အက်ပ်များမှာ -
3D တည်းဖြတ်သူများ: Blender, FreeCAD y MeshLab.
ပုံနှိပ် 3D: ထပ်ခါတလဲလဲ Slic3r နှင့် Ultimaker Cura ။
API Clients များ: အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့် စာပို့သမား Canary.
အသံအယ်ဒီတာများ: ဒေါသမီး, Audacity နှင့် Mixx ။
အသံဖွင့်စက်များ: ရဲရင့်, Museeks နှင့် Sayonara ။
အသံဖမ်းစက်များ: KWave, ထေရဝါဒ y WaveSurfer
အင်တာနက်ဘရောင်ဇာများ: Google က Chrome ကိုFirefox နှင့် Tor Browser တို့ဖြစ်သည်။
Cloud သိုလှောင်မှု: Dropbox ကို, ExpanDrive y Nextcloud.
command line applications များ: တစ်ချက်, သန်းခေါင်မှူး y MySQL ဆာဗာ.
ဒေတာဘေ့စအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ: DataGrip, DBeaver နှင့် Redis Desktop Manager ။
software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: Android-Studio, Atom နှင့် NetBeans.
ပုံကြမ်း: မင်းတုန်းမင်း, မင်းတုန်းမင်း y Xmind 8 ။
Disk Utilities: JDiskReport, Partition Manager နှင့် QDirStat ။
EBooks ကြည့်ရှုသူများ: buka, caliber y FBReader.
ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ: Anki, RStudio y Xournal.
မေးလ်ဖောက်သည်များ: Thunderbird ကို, Thunderbird ကို Beta နှင့် Outlook (အီလက်ထရွန်အတွက်တရား ၀ င်မဟုတ်သောဗားရှင်း) ။
ဖိုင်မန်နေဂျာများ: တပ်မှူးနှစ်ဆ, မင်းက y စုစုပေါင်းတပ်မှူး.
ဂရပ်ဖစ်တည်းဖြတ်ရေး: Blender, Krita နှင့် Inkscape ။
IDEs: Bluefish၊ CodeBlocks များ y WebStorm
ရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများ: Nomacs, Ristretto y Shotwell.
အင်တာနက် application များ: ကြေးနန်း၊ Skype နှင့် WhatsApp ကို
သင်တန်ဖိုးထားနိုင်သည့်အတိုင်း "အပ္ပိ" ၎င်းသည်လူသိများပြီးလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများသာမကအချို့သောရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိရန်နှင့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည် GNU / Linux Distros, သူတို့ repositories ကိုအတွက်ဇာတိထောက်ပံ့ကြသည်မဟုတ်။
တိုတိုပြောရရင် "အပ္ပိ" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် “ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့စီမံကိန်း" တစ် ဦး အလွကမ်းလှမ်း က်ဘ်ဆိုက် ကအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် AppImage format နဲ့ app repository ကို။ ထိုအယခုတိုင်အောင်, ထက်ပို။ အိမ်များ 200 အရည်အသွေးမြင့်အက်ပ်များ အလွယ်တကူမဆိုခေတ်သစ်အတွက် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာရန်သေချာသည် ပိုမိုလုံခြုံပြီးစိတ်ချရသောအက်ပ်များကိုသေချာပါစေ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Apprepo - AppImage ပုံစံဖြင့်အက်ပ်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နောက်ထပ်ကွန်ယက်သိုလှောင်ခန်း
မင်္ဂလာပါ။ ၎င်းသည်သူတို့၏အပိုင်းကိုဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ဆိုဒ်သည် alpha အဆင့်တွင်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ငြိမ်ပြီးလုံးဝလုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ထွက်ခွာသည်အထိမည်သို့မည်ပုံတည်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
Heretic and Hexen: "ဟောင်းကျောင်း" ဂိမ်းများကို GNU / Linux တွင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း။